Minisiteran’ny Toekarena – BIT : namaritana tetikasa ny any atsimo | NewsMada
Minisiteran’ny Toekarena – BIT : namaritana tetikasa ny any atsimo
Noho ny fahitana ny fahasahiranana mahazo ny faritra atsimo, nojeren’ny minisiteran’ny Toekarena sy ny tetipivoarana ny fomba hanomezana asa ireo mponina sahirana nefa afaka miasa any an-toerana. Tetikasa iarahan’ny minisiteran’ny Toekarena sy amin’ny Birao iraisam-pirenena momba ny asa (Bit). Niara-nidina tany amin’ny faritra Androy io minisitera io sy ny BIT, tany amin’ny distrikan’i Tsihombe sy Ambovombe.
Nanangonam-baovao faran’izay betsaka any amin’ireo distrika ireo nandrafetana tetikasa ho famoronana asa, noho ny fahasahiranana lalina mahazo ny mponina any an-toerana. Ao anatin’izany tetikasa izany ny fanaovana asa tana-maro, fomba iray ahazoana mamita tetikasa be indrindra amin’ny fampiasana ireo olona any an-toerana, hahavitana asa sy vokatra tsara.
Nisy atrikasa natao ho fanomanana izany, ny 30 oktobra 2017, tao amin’ny distrikan’Ambovombe, niantsoana ireo ben’ny Tanàna avy amin’ny kaominina samihafa, nahafantarana ny hetahetan’izy ireo. Efatra amin’ireo kaominina sivy ny ao amin’ny distrikan’i Tsihombe ary 13 ny ao amin’ny distrikan’Ambovombe namaly ny antso. Nozahana mivantana ny zava-misy any amin’ireo distrika ireo : lalana 288 km mampifandray ireo kaominina samihafa, nasian’ny minisiteran’ny Toekarena sy ny BIT resaka ; miampy ireo seha-pihariana hafa, toy ny fandrafetan-kazo, fitrandrahana kinana (huile de ricin) sy landy. Ireo rehetra ireo, mendrika hahazo tohana ara-teknika, raha ny fahitan’ny roa tonta azy.
Tsy mijanona hatreo ihany anefa ny ataon’ny minisiteran’ny Toekarena any amin’iny faritra iny fa tohizana amin’ny fikarohana hahatrarana ny tanjona hisian’ny fampandrosoana any amin’ny faritra atsimon’ny Nosy. Faritra izay miaina ao anatin’ny fahasahiranana hatramin’ny taona maro.